China Sodium Sulfite rụpụta na Factory | Ntinye
Ọdịdị na ọdịdị: ọcha, kristal monoclinic ma ọ bụ ntụ ntụ.
Ebe na-agbaze (℃): 150 (mmiri ọnwụ decomposition)
Ikwu njupụta (mmiri = 1): 2.63
Usoro Molekụl: Na2SO3
Molekụla arọ: 126.04 (252.04)
Solubility: Soluble na mmiri (67.8g / 100 mL (mmiri asaa, 18 °C), anaghị agbasasị na ethanol, wdg.
Ebe na-agbaze (℃): 150 (mmiri na-efu mmiri)
Solubility: Soluble na mmiri (67.8g / 100 mL (mmiri asaa, 18 Celsius C), unyi anaghị agbasa na ethanol, wdg.
Sodium Sulfite na-adị mfe na-ekpo ọkụ ma na-etinye ya na sodium sulfate na ikuku. Ọnwụ nke mmiri mmiri na 150 A .Mgbe ikpo ọkụ, ọ na-agbaze n'ime ngwakọta nke sodium sulfide na sodium sulfate.The njupụta nke ihe anhydrous bụ 2.633. hydrate na enweghị mgbanwe na ikuku akọrọ. Ọkụ na-ekpo ọkụ na ọgbọ nke sodium sulfide na sodium sulfate, na nrụrụ acid siri ike na-abanye n'ime salts kwekọrọ na ịhapụ sọlfọ dioxide. sulfite nwere ike ibuputa ihe ndi nwere otutu ion ma mee ka o sie ike), ma nwekwaa ike belata oxidants na-adighi ike dika phosphotungstic acid.Sodium sulfite na nnu hydrogen nwere ike iji wepu peroxides nke ihe ndi ozo na laabu (tinye obere mmiri, kpalie mmeghachi omume na obere okpomọkụ ma kewaa mmiri mmiri ahụ, a na-akpọ nkụ ether na ngwa ngwa wayo, maka ụfọdụ mmeghachi omume na obere ihe achọrọ) .Ọ nwere ike iji neutralized hydrogen sulfide belata.
Akụkụ nke mmeghachi omume mmeghachi omume:
H2SO3 + Na2CO3 = = = dee Na2SO3 + CO2 + H2O
2 nahso3 = = delta = = Na2SO3 + H2O + SO2 dee
3 na2so3 hno3 + 2 + 2 = = = = 3 na2so4 edeghi + H2O
2Na2SO3 + O2 ==== 2No2SO4
3. The kpo oku:
4. Ọxị Oxidation:
Na2SO3 + 3 h2s = = = = 3 s ekpe + Na2S + 3 h2o 
Nkwadebe ụlọ nyocha
A na-ewepu ihe ngwọta sodium carbonate na 40 ℃ ma jupụta na sọlfọ dioxide, mgbe ahụ, a na-agbakwunye otu ihe nke sodium carbonate ihe ngwọta, a na-etekwa ihe ngwọta ya n'okpuru ọnọdụ nke izere ịkpọtụrụ na ikuku.
AKWKWỌ AKW (KWỌ (AS PB):
1. Mgbe agbaze, kọwaa na ịrụ ọrụ nke ọma, a na-agbakwunye sọlfọ ahụ na sọlfọ ahụ nke ukwuu site na sọlfọ ahụ.
2. Mgbe emechara ikuku, kpoo ma dị ọcha, sọlfọ nke oku na-ere ọkụ na sọlfọ sọlitere iji mepụta gas SO2 (ọkụ oku).
3. A na-eme ka ikpo oku dị ọkụ site na ite mkpofu iji weghachite uzuoku, wee banye na onye na-eme ka desulfurization. A na-ewepu sọlfọ sublimation na gas, wee nweta gas dị ọcha na 20.5% SO2 ọdịnaya (olu), wee banye ụlọ elu absorption.
4, soda nwere ihe ntinye nke lye, na nzaghachi sulphur dioxide iji nweta sodium bisulfite.
5, sodium sulfite hydrogen sodium solution site na caustic soda neutralization iji nweta sodium sulfite solution.
6, Sodium sulfite na-eme ka mmiri gbasaa, na-eji okpukpu abụọ arụ ọrụ na-aga n'ihu na-echekwa mmiri a na-ekpochapụ mmiri wee nweta nkwusioru nwere kristal sulfite sulfate.
7. Etinye concentrator ruru eru ihe n'ime centrifuge na-aghọta ihe siri ike-mmiri mmiri nkewa. Ihe siri ike (mmiri sodium sulfite) na-abanye na draya ikuku, ihe ọkụkụ gwụchara site na ikuku ọkụ.
A na-emegharị mmanya na-aba n'anya na tankị na-ekesa alkali maka imegharị ihe.
Nwee ihe karịrị afọ 10 ahụmịhe ọkachamara na mmepụta nke Sodium Sulfite;
Ntị na Jiri
Ihe egwu ahụike: na anya, anụ ahụ, iwe akpụkpọ anụ mucous.
Ihe egwu gburugburu ebe obibi: ihe egwu na gburugburu ebe obibi, nwere ike ibute mmetuta mmiri.
Ihe mgbawa mgbawa: ngwaahịa a anaghị ere ọkụ ma na-ewe iwe.
Skin contact: wepụ rụrụ arụ uwe na itucha na ọtụtụ nke na-agba agba mmiri.
Nleta anya: Welite nku anya ma jiri mmiri na-agba agba ma ọ bụ saline sachaa. Gaa na dọkịta.
Inhalation: pụọ na ọnọdụ ahụ gaa ikuku ọhụrụ. Nye oxygen ma ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike iku ume. Gaa na dọkịta.
Na-a :ụ: drinkụọ mmiri ọkụ zuru ezu iji kpalite ọgbụgbọ. Gaa na dọkịta.
Usoro njikwa ọkụ
Njirimara ihe egwu dị egwu: enweghị ọkụ na mgbawa pụrụ iche. Nnukwu ikpo ọkụ na-emepụta anwụrụ ọkụ sulphide na-egbu egbu.
Ngwaahịa combustion na-emerụ emerụ: Sulphide.
Exzọ a na-agbanyụ ọkụ: ndị ọrụ ọkụ ga-eyiri ọkụ zuru oke - uwe na-agba akaebe, ọgụ ọkụ na windo.
Nzaghachi Mberede maka leakage
Ọgwụgwọ mberede: kewapụ ebe mmetọ ahụ na-agbapụ ma gbochie ịnweta. A na-atụ aro ka ndị ọrụ mberede na-eyi ihe nkpuchi uzuzu (mkpuchi zuru ezu) na akwa gas. Zere uzuzu, jiri nlezianya zaa, tinye n'ime akpa ma bufee ya n'ebe dị mma. A ga-eji ọtụtụ mmiri saa gị ma gbanye ya n'ime mmiri mkpofu. Ọ bụrụ na ọnụọgụ dị ukwuu, kpuchie ya na mpempe plastik na kwaaji. Anakọta, megharịa ma ọ bụ kwaga ebe mkpofu maka mkpofu.
Mwepu ya na nchekwa
Prerụ ọrụ: ikuku na-arụ ọrụ, na-eme ka ikuku sie ike. Ndị na-arụ ọrụ ga-abụ ndị a zụrụ azụ ma na-agbaso usoro ọrụ. .Ezere ájá. Zere ịkpọtụrụ na acid.njide dị mfe iji gbochie mbukota mmebi.Ekwadoro na leakage ngwa ọgwụgwọ ngwa ngwa.Empty containers nwere ike idowe emerụ bekee.
Kpachara anya maka nchekwa: Chekwaa n'ụlọ nkwakọba ihe dị jụụ, ikuku na-ekpo ọkụ. Zere ọkụ na okpomọkụ. A ga-ekewapụ ya na acid na nchekwa ndị ọzọ, agwakọtala nchekwa. nchapu.
Njikwa kọntaktị / nchedo onwe onye
Njikwa injinia: a na-emechi usoro mmepụta, a na-eme ka ventilashị dị ike.
Usoro nchebe iku ume: mgbe uzuzu ikuku dị na ikuku karịrị ụkpụrụ ahụ, ị ​​ga-eyi ihe nhicha ntụ ntụ nke onwe.Ọ bụrụ na nnapụta nke mberede ma ọ bụ mwepụ, a ga-eyi ikuku iku ume.
Anya nchedo: eyi ugegbe nchekwa.
Nchedo ahụ: yikwasị uwe ọrụ na-egbu egbu.
Nchedo aka: eyi uwe roba.
Nchedo ndị ọzọ: gbanwee uwe ọrụ n'oge.
Kwụsi ike na imeghachi omume
Ogige egbochiri: acid siri ike, aluminom, magnesium.
Ngwa ire ere: sọlfọ dioxide na sodium sulfate
Biodegradability: enweghị biodegradability
Mmetụta ndị ọzọ na-emerụ ahụ: ihe ahụ na-emerụ gburugburu ebe obibi, a ga-akwụnye nlebara anya pụrụ iche na mmetọ mmiri.
Prezọ Mbugharị Thegbọ njem: Mbukota ahụ ga-ezu ezu ma na-ebu ya kwesịrị ịnọ na nchekwa. Gbaa mbọ hụ na akpa anaghị agbapu, na-ada, na-ada ma ọ bụ na-emebi mgbe a na-ebugharị. ekpughere n'anyanwụ, mmiri ozuzo na nnukwu okpomọkụ. Ekwesịrị ịsacha ụgbọala ahụ nke ọma mgbe njem.
Nke gara aga: Sodium Metabisulphite
Osote: Brọda Sodium
Hydrosulfite De Sodium, Hydrosulfite, Calcium Bromide Anhydrous, Natrium Hydrosulfite, Calcium Bromide Ngwọta, Calcium Bromide mmiri mmiri,